ကျော်လွင်အောင် - ကော့သောင်း ၊ သုံးဆူနဲ့ ဟွေ့မလိုင်း နေ့ရက်များ (၃) - MoeMaKa Media
Home / 8888 / Community / Experience / Kyaw Lwin Aung / ကျော်လွင်အောင် - ကော့သောင်း ၊ သုံးဆူနဲ့ ဟွေ့မလိုင်း နေ့ရက်များ (၃)
ကျော်လွင်အောင် - ကော့သောင်း ၊ သုံးဆူနဲ့ ဟွေ့မလိုင်း နေ့ရက်များ (၃)
8888, Community, Experience, Kyaw Lwin Aung
(မိုးမခ) ဩဂုတ် ၁၉၊ ၂၀၂၀
8888 (5) - သေဘောဘိုးစခန်း (သို့) ဒီမို ပွဲစျေးတန်း
၁၉၈၈ အောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်း သေဘောဘိုး စျေးတန်းမှာ လူငယ်လူလတ် ယောကျာ်းလေးအများစု မိန်းခလေးအချို့နဲ့ စည်ကားနေပါတယ် စျေးရောင်းတဲ့ဆိုင်ခန်းတဲတန်းတွေထဲမှာ အိပ်တချို့ ထိုင်တစုနဲ့ ဟိုသည်လျှောက်သွားနေကြတာ တဖုံ အိုစုံလို့စုံလို့။
ပူအိုက် ဖုံထူ မိုးရွာလိုက်ရင် ဗွက်ပေါက် ကျွန်းပင်ပျိုတွေ အောက်က လူတွေကြား ရှောင်ရင်း သတင်းပြန်ကြားရေးမှာ သတင်းပို့ ၊ ညဘက် အစည်းအဝေး တက်ဖို့နဲ့ပြောလိုက်တဲ့အသံက ထမင်းဆောင်က ဆက်တိုက်အော်နေတဲ့ အသံကြား မပီသ မသဲမကွဲ။
'တပ်ခွဲ သုံး ... ထမင်းစားအလှည့်ပါ'
'တပ်ခွဲ.... ထမင်းစား... '
ကိုယ်တွေ လေးယောက်သား စုရပ်ရွေးပြီး ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် မော်လမြိုင် ကျိုက်သုတ်အဖွဲ့က အသိ တစ်ယောက် ယောက်နဲ့တွေ့မလား လိုက်လျှောက်ကြည့်နေတုန်း သံလွင်ရုံရှေ့မှာနေတဲ့ ကျောင်နေဖက် ဗားခြား (Vulture) နဲ့သွားတွေ့တယ် ဆိုင်ခန်းတစ်ခုထဲမှာ လဲလျောင်း စိတ်ပျက်နေပုံ -
မေးကြည့်တော့ 'ဟိုကောင်တွေ သွားမယ်ဆိုလို့ လိုက်လာတာ ။ ဟူး အလကားပါကွာ ။ ဘာမှလဲဟုတ်ဘူး။ ပြန်ဆင်းတော့ မလို့'
လူတွေ ဒီလောက်များများ ဒီနေရာမှာ လာစုနေရအောင် ဘယ်သူကမှ 'သွားဟ' 'သွားဟ' လို့ မောင်းတင်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲ တစ်ခုခု လုပ်ချင် တိုက်ချင် စွန့်စားချင်စိတ်တွေ နဲ့ ရောက်လာစုဝေးနေကြတာကို ငေးကြည့်နေမိ။
အလင်းရောင် မပြည့်မစုံ ဆေးလိပ်မီးခိုးတွေ နဲ့ ခပ်မှောင်မှောင် တဲကြီးကြီးတစ်လုံးမှာ အစည်းအဝေး လုပ်ပါတယ် ။ အော်ဟစ်ပြောဆို ငြင်းခုံပွဲတစ်ခု။ ကိုယ်တွေ စကားမပေါက် မတိုးသာ။ ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှာပဲ ရနောင်းရောက်ရှိ ကျောင်းသားစာရင်း၊ ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ပေးခဲ့ပြီး ကိုယ်တွေရဲ့ခရီးရည်ရွယ်ပြီးမြောက်တယ်ဆိုပါစို့။
ညဘက် ထွန်းထွန်းဝင်းအသိ ရာဇူးကဆရာမတွေဆီသွား လည်တော့ 'တော်လှန်ရေး ဆိုလို့ ထွက်လာလိုက်တာ ခုထိ ဘာဆို ဘာမှ.... ' ။ အခန်းထဲက တစ်ယောက်ထွက်လာထိုင်တော့ ကျိုက်သုတ်က နာမည်ကြီးမမနဲ့ ဆုံရသကိုး။
'ကျော့မှူးသတင်းပျောက်နေတာ ခုမှ သိရတယ်' တဲ့။ အဲဒီအချိန် သေဘောဘိုးကို အဝင်လွယ်သလောက် မဲဆောက်ဘက် ပြန်အထွက်ကို ထိုင်းရဲက စိစစ်သဗျိုး။ လိုင်းကားပေါ် ကျောင်းသားပုံစံ တစ်ယောက် တက် ဆွဲချထားခဲ့ ။ ကျောင်းသား ပါနေရင် ကားပေးမထွက် ။ ခက်ကပြီ ။ တစ်ရက်အခြေအနေကြည့် ပြန်ဆုတ် ။တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ ကျွေးနေတာ ဝင်တန်းစီ စား။ သင်္ဘောသီး ရေစပ်စပ်ဟင်း ငပိရည် ဖရဲသီး အတို့နဲ့ ထမင်းပူပူ လွေးရင်း ဗိုက်ပြည့် အိပ်ငိုက်။
နောက်ရက်တွေမှာ ပြန်ထွက်ဖို့ နည်းလမ်းရှာ။ 'လာနေကျ လူတွေ ကုန်သည်ပွဲစားတွေ ဘယ်လိုဝတ်စား ပြောဆို' အတုယူ ။ ကွမ်းတွေစား ပုဆိုးနွမ်းတိုတိုဝတ် ။ အင်္ကျီလက်တို အကြမ်းဝတ် ။ လူစုခွဲ ကားတစ်စီး တစ်ယောက်နဲ့ ထွက်ကြတာ။
မဲဆောက်က ဗိုကျောက်ခဲအိမ်မှာပြန်ဆုံကြ။ မနက်ဖြန် ဘန်ကောက်ပြန်ဖို့ လက်မှတ်ဝယ်။ ပြန်မယ့်နေ့မှာ ဘုန်ကြီးကျောင်း(မယ်တော်ကျောင်း?) ကနေ ကားစောင့်ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းလောက် ကားပေါ်ရောက်တယ်။ အပြန်ခရီး စိတ်ချလက်ချအိပ်လိုက်တာ ညဦးပိုင်း ကားထိုးရပ်လို့ စစ်ဆေးရေးဂိတ်က ရဲတွေ တက်လာတယ် ။ ကိုယ်တွေ လေးယောက်သား တန်းစီဆွဲချထားခံရ၊ ကိုယ်နဲ့ထွန်းထွန်းဝင်း၊ တင်ခက်နဲ့ထင်ကျော် နှစ်ယောက်တွဲ ။လက်ထိပ်ခတ် ။ နောက်နေ့ မဲဆောက်ရဲစခန်းအချုပ်ကို ရောက်တဲ့ည မှာ သတင်းထောက် တစ်ယောက် လာဗျူး။ 'ဘန်ကောက်ပြန် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်လေးယောက် ၊ တရားမဝင်နယ်ကျော်မှုနဲ့ အချုပ်ခံရ' ။နောက်နေ့ သတင်းစာထဲပါလာတယ်။ တရားရုံးတင် ထောင်(၁)လ အမိန့်ချ ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တော်လှန်ရေးလုပ်မယ့်သူ လေးဦး မဲဆောက်ထောင်ကျ တစ်လ ဘဝ ဖြတ်သန်းခဲ့ရ။
8888 (6) - မဲဆောက်ထောင်ထွက်လေးဦး ကော့မူးရာ (ဝမ်းခါသစ်) ရောက်
ရနောင်း-ဘန်ကောက်-မဲဆောက် - သေဘောဘိုး (ဆက်သွယ်ရေး)တာဝန်က တစ်ခြမ်းတော့ ပြီးဆုံးခဲ့ပေမယ့် ဘန်ကောက်ပြန်အတက် ဟိုင်းဝေးရဲစခန်းမှာ ဖမ်းမိ။ မဲဆောက်ထောင် တစ်လကာလကတော့ အင်းစိန်၊ မော်မလမြိုင် ထောင်တစ်နှစ်ခွဲနီးပါးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကိုယ်တွေအတွက် မထူးပေမယ့် ကျန်သူတွေအတွက်တော့ ဖတ်စ်တိုင်း ပေမယ်ပေါ့။ ထောင်ထဲ ဝင်ဝင်ချင်း ဆံပင်ညှပ်တဲ့ ထိုင်းကိုယ်တော်က ပုံစံမညှပ်ဘဲ ဂတုံးတုံးပေးလိုက်တယ် ။ နေခဲ့ရတဲ့ တစ်လတွင်း စားစရာတွေ ခွဲပေး ကူညီပေးပါတယ် ။ သူ့အလုပ်ခန်း ဘေး အုတ်တံတိုင်းကြားက ကိုယ်တွေ လေးယောက် စုအိပ် စုစား စုနားရာပေါ့။ နေ့လည်နေ့ခင်း အဆာပြေ ဖိုက ရတဲ့ ထမင်းဂျိုးကို တဂျွမ်းဂျွမ်း ကိုက်စား ခဲ့ကြ၊ အစားအသောက်ကတော့ သိပ် မဆိုးပါ၊ ပုံမှန်ဆေးကုခန်း၊ အလှူအတန်းနဲ့ ပရိဘောဂအချောထည်တွေကို ကော်ပတ်စားရင်း တစ်နေ့ပြီး တစ်နေ့ ကုန်ပေဦးတော့၊ လွတ်ရက်မှာ ထောင်ဘူးဝက ကားကို ထောင်က ဝန်ထမ်းကပဲ မောင်းပြီး ကျောက်ခဲအိမ်အရောက် လိုက်ပို့ပါတယ် ။
အိမ်အဝင် တဲလေးထဲကထွက်လာတဲ့ လူတစ်ယောက် ...
ကိုသက်လွင် (၈၃ကဗျာစာအုပ် အမှုတွဲ၊) နဲ့တွေ့ရတော့ အံ့ဩမိတာ က ဘာဟုတ်သေးတုန်း ။ အိမ်ပေါ်တက်တော့ ဘုရားစင်ရှေ့မှာ အိပ်နေတဲ့ နှစ်ယောက်က "မွန်းအောင်" နဲ့ ကိုယ့်ဘော်ဒါ "ကိုထူး"(ထူးအိမ်သင်)။
'ဘယ်က နေဘယ်လို' ဘုရားသုံးဆူ ဘက်ကနေ့ ရွေ့လာတဲ့ အကြောင်းရင်း သိပြီး မှတ်မှတ်ရရ ဗိုကျောက်အိမ်မှာ ဝက်သားဟင်း၊ အချဥ်ဟင်း၊ ငပိ တို့စရာနဲ့ စားလို့ မြိန်လိုက်တာ ။ ဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ ထောင်ထွက်ဦး ထမင်းတစ်နပ်ပါ။ အန်ကယ်(ကိုသက်လွင်)ပြောတော့ မင်းတို့ လွတ်လာမှာမို့ တမင်ချက်ထားတာ ဆိုပဲ။
နောက်နေ့မှာ ကျောက်ခဲ၊ ကိုသက်လွင်တို့ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့လို့ ကော့မူးရာကို (၆)ယောက်သား ရောက်ခဲ့ကြ၊ လူရှင်းတဲ့ ရခိုင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဝင်း ဘားတိုက်ရှည်တစ်ခုထဲ နေရာချထားပေးခဲ့၊ နာမည်လေးက ခေါ်လို့ ကောင်းလိုက်တာ "ကော့မူးရာ" တဲ့ 'ဝါးခါ'ဟောင်းနဲ့ ကွဲပြား 'ဝါးခါသစ်' လို့များခေါ်သေးသလား။ စခန်းဘေးမှာတော့ စိမ်းပြာရေကြည် သောင်းရင်းမြစ် က သူမသိသလို စီးဆင်းလို့ရယ်။
၁၉၈၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလထဲ၊ ဆောင်းတွင်းကြီး နှင်းဖွဲဖွဲမှာ စောစောစီးစီး ထမင်းဖိုနားက မိုးဗြဲဒယ်ဘေးမှာ ခပ်ကုပ်ကုပ်လေး စုနိုင်မှ မနေ့ည လက်ကျန် ထမင်းကြော်ပလိန်းကို စားရမှာလေ။ အေးမြတဲ့ မြစ်ရေတွေထဲ မျက်နှာသစ် မလို့ပြင်နေတုန်း ...
"ပြန်ခွင့်မပြန်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိတော့တဲ့ ဝါးခ ဆောင်း" ဆိုပြီး "ဝုန်း" ခနဲ ခုန်ချ လာတဲ့ ကိုထူး၊ ကိုမွန်းအောင်တို့ကို ခု ရေးနေရင်း သတိရမိ။
ညဘက် သူတို့ နှစ်ယောက်သာ ငှားလို့ရတဲ့ ဂီတာနဲ့ သီချင်းတွေ တီးကြ၊ မှတ်မှတ်ရရ ကိုထူး ရဲ့ " အမေ" သီချင်းများ၊ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ "အမေ့အေးရိပ် သားပြန်ခဲ့ပြီ"သီချင်းကို ခုထိ ကြားယောင်နေဆဲ၊ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒိညက တီးတဲ့ ဂီတာက နံပါတ်သုံး ကြိုး ပြတ်နေတာ သတိရတယ်။ ကိုထူးနဲ့ ဘေးချင်း ကပ်အိပ်ရင်း သူ့အမေ ကိုယ့်အမေ ချက်ကျွေးလေ့ရှိတဲ့ ဟင်းလျာကောင်း ကောင်းတွေအကြောင်း ပြောကြ၊ ဗိုက်တွေဆာ၊ တံတွေးတွေ မြိုချခဲ့ကြရ၊ ငတ်လာတော့ နှစ်ယောက်သား ဘုန်းကြီးကျောင်း ကထိန်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေဝိုင်းထဲ ဝင်ပြီး ဝက်သားဟင်းလု စားခဲ့ကြတာတွေ ခုနေရှိသေးရင်း မေးလိုက်ချင်ပါဘိ "မှတ်မိသေးလေား ကိုထူး"ရေ၊ လို့ ။
(၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ရန်ကုန်ကို ကိုယ် မိန်းမခိုးပြေးလို့ ကိုသောင်းရဲ့ "Mirage" လက်ဖက်ရည်ဆိုင် မှာ မင်္ဂလာပွဲကို ကိုထူး တက်ရောက်ချီးမြှင့်။ 'မင်္ဂလာဦး နေ့လည်စာ' ကို ကုက္ကိုင်း မှာ ကိုထူးက လိုက်ကျွေးတော့ တောခိုတုန်း က အကြောင်းတွေ ပြောဖြစ်ခဲ့သေး)
ကော့မူးရာ မှာ တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ' အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် ... တဲ့ ။ သတင်းနားစွင့် 'ဒီအေဘီ' တဲ့ သတင်းနားစွင့် ... ။
အေဘီမှာ 'ထွန်းအောင်ကျော်' က ဥက္ကဌ။ 'သန်းဝင်း'က အတွင်းရေးမှူ၊ သတင်း ကြားရ။ နေ့ခင်းပိုင်းတွေမှာ စခန်းထဲက ကေအင်ယူ တပ်မဟာ (၁) ဆေးနား ခွင့်ယူနေတဲ့ အရာခံဗိုလ် ဖထီး အိမ်သွား ချက်စ်ထိုး၊ သူ့အတွေ့အကြုံတွေ ကြားရ၊ သူထုတ်ပေးတဲ့ ထိုင်းကပေးတဲ့ ရိက္ခာခြောက် ထမင်း(ခြောက်)ထုပ်ကို ဆီလေး တစ်ဘတ်ဖိုးပြေးဝယ် ထမခြောက်လှော်ပြီး ရေနွေးကြမ်းနဲ့ မြည်းခဲ့တာတွေ။ တစ်ခါတစ်ရံ လာတဲ့ ဗိုကျောက် ကလည်း လာခဲပါဘိတောင်း။ သူလာမှ သတင်းအသစ်လေးတွေ ကြားရမှာလေ။
ဒီလိုနဲ့ ကော့မူးရာ ရောက် ရနောင်းသား လေးယောက်ထဲက တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ကိုယ့်အစီအစဥ်နဲ့ ကိုယ် "ဒိုး"ကြပြီ၊ နောက်တော့ ကိုယ်လဲ ကိုယ့်အကြံနဲ့ ကိုယ် မဲဆောက် ဗိုကျောက်အိမ် စခန်းထောက် ရောက်ရပြန်တယ်။
အန်ကယ်(ကိုသက်လွင်)ကလည်း အိမ်ဝင်းပေါက်နားက သွပ်မိုးသွပ်ကာ တဲလေးထဲမှာ ခပ်ကုပ်ကုပ်။ ဗိုကျောက်က မူးလာရင် အိမ်ဝင်းဟိုဘက်က စပါးခင်းထဲသွား သေနတ်အရှည်အတိုတွေ တဖန်းဖန်းပစ်၊ မီးမျှောပွဲတော်က အသံတွေနဲ့ ရောင်တော်ပြန်ရောလွှတ်၊ " ဖန်း" " ဖန်း"။
တစ်နေ့မှာ အန်ကယ်က ပြောတယ်၊ ပြောင်ကြီးခေါင်းဆောင်တဲ့ ဝမ်းဖိုးဝမ်း အဖွဲ့ ၊ ကျော့မှူး၊ ကိုယ့်ညီ မင်းနောင်တို့ပါတဲ့ ရနောင်းရောက် အဖွဲ့တွေ ဘုရားသုံးဆူကို ရွှေ့လာကြပြီးတဲ့၊ ကိုယ်နဲ့အတူထွက်လာတဲ့ ကိုဇော်တို့ အဖွဲ့ သံဖြူဇရပ်ကလည်း အချို့ပါတယ်ဆိုပဲ။
ကဲ ခုဘာတွေလုပ်မလဲ? ကဲ အခု ဘာတွေ ဆက်လုပ်ရမလဲ ?
ဆက်ရန် . . . .
(7) 8888 မဲကသာချောင်းနံဘေးက သေဘောဘိုး အေ ဘီ တပ်စခန်း
ကျော်လွင်အောင် - ကော့သောင်း ၊ သုံးဆူနဲ့ ဟွေ့မလိုင်း နေ့ရက်များ (၃) Reviewed by MoeMaKa on 1:36 AM Rating: 5